ईतिहास - Print Peppermint
डिजाइन ब्लग / इतिहास
प्रिन्टिंग को इतिहास एक धनी र आकर्षण हो। यस सेक्सनमा, हामी पुरानो संसार र प्रिन्टिंगको विगतका प्रकारहरू हेर्छौं।
भर्खरका इतिहास लेखहरू
पूर्ण प्रिन्टिंग समयरेखा: कसरी प्रिन्टि H सयौं बर्षमा विकसित भएको छ
पूर्ण प्रिन्टि Time समयरेखा: कसरी मुद्रण बृद्धि भएको छ मुद्रण मा रुचि? पूर्ण प्रिन्टिंग टाइमलाइनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् जुन तपाईंलाई विगत धेरै सयौं बर्षमा प्रिन्टिolved कसरी विकसित भएको छ भन्ने बारे सिकाउनेछ। सोशल मिडियाको धेरै अघि, मानिसहरूले शब्द र तस्बिरहरूमार्फत आफूलाई अभिव्यक्त गरे। माटोमा स्क्र्याचि symb प्रतीकहरू सेकेन्डमा संसारभरि पठाइएका सन्देशहरूमा विकसित भयो। यो… थप पढ्नुहोस्
सुदूर, बितेको विगतबाट ब्लास्ट: कागजको इतिहास बुझ्ने
कागजको ईतिहास बुझ्दै जाँदा के तपाईंले कहिल्यै सोच्नुभयो कि कागज कहाँबाट आयो र कसले निम्तो दियो? निश्चित गर्नुहोस् कि तपाई तल पढिरहनु भएको छ कागजको पूर्ण ईतिहास सिक्नका लागि। के तपाईंले कहिल्यै सोच्नुभएको छ कि हामी वास्तवमै कति कागज प्रयोग गर्छौं? हामीले वातावरणीय संरक्षण एजेन्सीमा रेकर्ड जाँच गर्‍यौं। स्पष्ट रूपमा, आज 68 XNUMX लाख भन्दा बढी रूखहरू ... थप पढ्नुहोस्
इतिहास / कागज / प्रिन्टिंग बेसिक्स
रोटोग्राभोर प्रिन्टिंग र फोटो रिचोचिching - मार्टिनको साथ अन्तर्वार्ता
अस्टिन: ठीक छ। त्यसैले आज अक्टुबर १ छ र म यहाँ मेरो राम्रो मित्र मार्टिनको साथ बसिरहेको छु र म उनीसँग कुराकानी गर्न चाहान्छु कि प्रिन्टिंग संसारमा उनको अनुभवको बारेमा। तपाइँ मलाई प्रिन्टिंग काम वा प्रिन्टि printing संसारमा कसरी पस्नुभयो भनेर बताउनुहुन्छ? मार्टिन: मैले यसमा प्रवेश गर्ने तरिका मूलतया… थप पढ्नुहोस्
प्रिन्टि Press प्रेस कहिले सिर्जना गरिएको थियो? महत्वपूर्ण आविष्कारको संक्षिप्त इतिहास
"प्रिन्टिंग प्रेसको आविष्कार मानव इतिहासको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण घटनाहरू मध्ये एक थियो" - हा-जुन चांग यो सम्भव छ हामी पक्षपाती छौं, तर हामी सहयोग गर्न सक्दैनौं तर हा जुन चgसँग सहमत छौं। साधारण चीजहरू लिन यो एकदम सजिलो छ: विद्युत्को चमत्कार, बगिरहेको पानीको आवाश्यकता, नम्र प्रिन्टिंग प्रेस। … थप पढ्नुहोस्